ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ… Change your Perception | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ… Change your Perception
ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ… Change your Perception
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 11, 2015 in Myanma News, Opinions & Discussion | 23 comments
ကျောင်းသားသပိတ် ပင်မစစ်ကြောင်း မနေ့ပဲ လက်ပံတောင်းမှာ လုံထိန်းရဲတွေရဲ့ အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ဖြိုခွဲ ခံလိုက်ရပါပြီ။ ကျနော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ကြ မှာလဲ။ အရေးကြီးဆုံးနဲ့ လူတိုင်း အသက်ဆိုင်ဆုံး အချက်ကတော့ တွေဝေမိန်းမောမှုများ ရပ်ကြပါ။ ဒေါ်စုကို ထောက်ခံခံ၊ မင်းလောင်းပဲမျှော်မျှော် ခင်ဗျားတို့ အလှည့်ကြလျင်လည်း ညှာလိမ့်မည်မဟုတ် ဒီလို ရက်ရက်စက်စက် အဖိနှိပ်ခံရမည်ဆိုတာ သိဖို့ကောင်းပြီ။ ကျောင်းသားတွေ သွေး၊ချွေးနဲ့ရင်းပြီး ဖွတ်အစိုးမရ မျက်နှာဖုံးကို ဆွဲခွာပြသွားတယ်။ ရဲတင်းတဲ့ ကျောင်းသားမို့ ဒင်းတို့ လုပ်သလား.. မထင်ပါနဲ့၊ အလုပ်သမားလည်း ဒီလိုပဲလုပ်တယ်၊ လယ်သမားလည်း ဒီလိုပဲ၊ ဘုန်းကြီးလည်း ဒီလိုပဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ရွေးဂေါက်ပွဲနဲ့ စုမျှော်သူလည်း ဒီလိုပဲ ခံရလိမ့်မည်။ သတ်ပါတီဆိုတဲ့ကောင်လဲ ကိုယ့်အခွင့်အရေး တောင်းဆိုတဲ့အခါ ပုံစံတူ အတီးခံရမည်။ (ဒကောင်တွေတော့ သာကူးမည့်သူများတယ်) ကိုယ်နဲ့မဆိုင် ငြိမ်ခံနေလျင် ကိုယ့်အလှည့်ကြမှ သိလိမ့်မည်။
ဂဇက် ရဲမူးရာမည အူးဇီးသော ဘုရားစူး ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ နှိမ်နင်းနေပုံ
လက်တွေ့ ဘဝဟာ စိတ်ကူးထဲမှာလို မသာယာ.. ပေးဆပ်မှု ရှိမှ ရယူမှု ဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြစ်သွားလျင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့.. ဖြစ်လာဖို့ မရှိတဲ့အခါ လက်တွေ့ဘဝထဲကို ဝင်ပါ၊ လက်တွေ့ကျကျ ဖြေရှင်းရပါမည်။ လာမည့် ရွေးဂေါက်ပွဲမျှော်ပြီး လူထုမဲနဲ့ ဖြုတ်ဖို့ကြံတယ် ဆိုလည်း.. တရားမျှတတဲ့ ရလဒ်ထွက်ဖို့ အာမခံချက် မရှိဘူး..၊ ရွေးဂေါက်ပွဲကော်မရှင်ကိုယ်တိုင် စစ်ဗိုလ်တွေ အုပ်စီးထားတယ်။ မတရား လုပ်ပါပြီတဲ့.. ဆန္ဒပြလည်း ဒီလိုပဲ အနှိပ်ခံရမှာပဲ။ ဒါတွေကြောက်လို့ ငြိမ်ခံတော့ သနားပြီး ဒီမိုပေးလိမ့်မည် ထင်သလား။ ကျား ဘယ်တော့မှ ဥပုသ်မစောင့်..
တွေးခေါ်ပုံ ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံ ပြောင်းလိုက်ပါ။ သူ့ကို ဒီလိုလုပ်လျင် ငါလည်း ဒီလိုပဲ အလုပ်ခံရလိမ့်မည်ဆိုတာ သိလျင်..၊ မြန်တျန့် ဒီမိုတိုက်ပွဲဆိုတာ တပွဲထိုး မဟုတ်၊ ရေရှည်ဆင်နွှဲရမည် သိလျင်..၊ တိုက်ပွဲကို တဦး၊တဖွဲ့တည်း မောင်ပိုင်စည်းလို့ မရမှန်း သိလျင်..၊ ယုံကြည်ချက် တူနေသမျှ မယုတ်မာသ၍ လက်တွဲ ကူညီဖေးမ ရကောင်းမှန်း သိလျင်…၊ ရေစက်လေးများ ပေါင်းစုံတဲ့အခါ သမုဒ္ဒရာ ရေပြင်ကြီး ဖြစ်သွားကြောင်း သိလျင်… နောင်လာမည့်၊ လာလတ္တံ့သော မြေပေါ်မြေအောက် လှုပ်ရှားမှု ကြီး၊ငယ်များအတွက် ထိုက်တန်သော ပံ့ပိုးမှု စာဖတ်သူများ လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်ကြပါမည်။
နိဂုံးကိုတော့ ကျောင်းသားတော်လှန်ရေး သီချင်းအပိုင်းအစလေးတခုနဲ့ ပိတ်ပါ့မယ်..။ အားလုံး လိုက်ဆိုကြပါ..
ရိုင်းစိုင်းတဲ့ တောတိရာစ္ဆာန်များလည်း မဟုတ်…. အားလုံးက အသိနဲ့လူတွေ…. လက်နက်ပြ ခြိမ်းခြောက်ကာ အုပ်ချုပ်မှု ရပ်တန်းက ရပ်သင့်ပြီလေ…
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတိုက်ပွဲဝင် ကျောင်းသူားရဲဘော်များအား ဦးညွှတ်လျက်..
ဒီရက်ပိုင်း လူရော စိတ်ပါ အရမ်းပင်ပန်း ပြီး ဘယ်လိုမှ မအားနိုင်ဖြစ်နေလို့မရေးတော့ဘူးလို့နေနေတာ ။ဒါပေမယ့် ရေးဖြစ်သွားတယ် ။စာတော့ တော်တော်ရှည်သွားတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး ဆုံးအောင်တော့ ဖတ်ပေးပါ ။
ဘာကြောင့် ကျောင်းသား သပိတ်ကို မထောက်ခံသလဲ ။ ဘာကြောင့် NNER ကို မယုံကြည်ရသလဲ
ဇေယျာလွင် ကနေပဲ အစပြန်ကောက်မယ် ။ ဇေယျာလွင် က ဘက ကျောင်းတွေ ဖျက်သိမ်းဖို့ ပြောတယ် ဆိုပြီး ပထမ သတင်းတက်လာတယ် ။နောက် NNER က ပြန်ရှင်းတယ် ။ ဘက ကျောင်းတွေ ဖျက်ဖို့သူတို့ မပြောပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ခရစ်ယာန် ကျောင်းတွေက ထောက်ပြတောင်းဆိုလာတဲ့ အတွက် အခြားသော ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်း များက ဖွင့်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အတိုင်း သင်တဲ့ စာသင်ကျောင်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဖွင့် ခွင့် ပေးရမယ်ဆိုပြီး ပြောတာပါဆိုပြီး ရှင်းတယ် ။
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း သူတို့ တွေဆီကပဲ စကားသံတွေ ပြန်ထွက်လာတယ် ။ NNER က ဘက ကျောင်း တွေ ဖျက်ဖို့ မပြောဘူး ။ ဇေယျာလွင် ဟာ သူ့ စကားအတွက် သူတာဝန်ယူရမယ် ဆိုပြီး ။ နောက် ဆရာမ နဲ့စကားများ တဲ့ ဗီဒီယို ထဲ မှာ ဆရာမက အဲ့ဒါဆို မင်းဘာလို့ဘက ကျောင်းတွေကို ထည့် ပြောရသလဲ ဆိုပြီး ပါလာတယ် ။ ဗီဒီယို က ဖြတ်တင်တော့ အစုံပါမလာတော့ အတိအကျတော့ ပြောရခက်တယ် ။စဉ်းစားကြည့်တာတော့ ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ် ။ သူတို့ တွေက တခြား ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းက ဖွင့်တဲ့ ကျောင်းတွေကိုပါ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွင့် ခွင့် ပေးရမယ်လို့ ဆိုလိမ့်မယ်။ ဒါကို ဆရာမတွေက ကန့် ကွက်တော့ ဒါဆို ဘက ကျောင်းတွေပါ ပိတ်ရမှာပေါ့ ဆိုပြီး ဇေယျာလွင် က ပြန်ပြောပါလိမ့်မယ် ။အဲဒါကြောင့် ဆရာမက ဘက ကျောင်းတွေ ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက် ရှိလဲ မင်းသိလား ဆိုပြီး ပြန်မေးတာနေမယ် ။ဒီလို စဉ်းစားမိတယ် ။NNER အနေနဲ့ ကတော့ ဘက ကျောင်းတွေ ဖျက်ဖို့ ပြောမယ် မထင်ဘူး ။ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းတွေ ဖွင့် သကဲ့သို့ သာ ကျန် ခရစ်ယာန်ချက်ကျောင်းများ ဗလီများက လည်း အတန်းပညာသင်ကျောင်းတွေ ဖွင့်ချင်ရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွင့်ခွင့် ပေးရမယ်လို့ သာ ပြောခြင်း ဖြစ်တယ် ။အဲ့တော့ အဲဒီအခြားဘာသာက ဖွင့်မယ့် ဘာသာရေးကျောင်းမဟုတ်သော အတန်းပညာသင်ကျောင်းတွေကို ဖွင့်ခွင့်မပေးနိုင်ရင် ဗုဒဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းကဖွင့်တဲ့ အတန်းပညာရေးကျောင်းကိုလည်း ပိတ် ။ ဒါမှ တရားမျှတမယ် ။ ဒီဖြစ်ရပ် တစ်ခုတည်းပဲ ကြည့်ရင် ဇေယျာလွင်ပြောတာ မှန်သားပဲ ။ဒါပေမယ့် အမှန်တရားဆိုတာ တခါတလေ သိပ်ကျယ်ပြန့် လွန်းပါတယ် ။
နောက်တစ်ချက်ဆက်ရရင် သုတို့ တောင်းဆိုတဲ့ အထဲမှာ အခြေခံပညာကျောင်းတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်ပြထာန်းခွင့်ရှိရမယ်လို့ ဆိုတယ် ။ တက္ကသိုလ်တွေမှာတောင် ကိုယ်ပိုင်ပြထာန်းခွင့် ဆိုတာကိုးလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့အဆင့်သင့်ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတာတောင် သံသယ၀င်စရာ အခြေအနေပါ ။ ဒါကို အခြေံခံကျောင်းတွေအတွက် ကိုယ်ပိုင်ပြထာန်းခွင့်ဆိုတော့ အဲ့ဒီ ဥပဒေရေးတဲ့ သူတွေဟာြိမန်မာနိုင်ငံက အခြေခံကျောင်း ဘယ်နှစ်ကျောင်းလောက် ကို သွားရောက်လေ့လာပြီးမှ ရေးဆွဲတာလဲမေးချင်တယ် ။လက်ရှိ မြို့ ပေါ်ကျောင်းတွေထားတော့ တောရွာတွေက ကျောင်းတွေဟာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုကို ရေးဆွဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေပြီလာ ။ အဲဒီ့လို ယုံကြည်နေသလား ။ အဲဒါတွေကို ဘယ်သူက လုပ်မှာလဲ ဆိုတော့ လက်ရှိ မိဘ ဆရာအသင်းကို ဖျက်ပြီး ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့ ရမတဲ့ ။ အဲထဲမှာ ဆရာအချို့ ရယ် ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေရယ် ရပ်မိ ရပ်ဖတွေရယ် ပါရမတဲ့ ။အဲဒီ အဖွဲ့ က သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းဆွဲမယ့် ကိစ္စတွေ ဆရာတွေကို ဝေဖန်အမှတ်ပေးတာတွေ လုပ်ကြမတဲ့ ။ ကျောင်းသားတွေက ကိုယ်သင်ရမယ့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရေးဆွဲကြရမတဲ့ ။ အခြေခံကျောင်းမှာတောင် ကျောင်းသား သမဂ္ဂဖွဲ့ ပြီး ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးထဲ ပါမယ်တဲ့ ။ ကျေးရွာတွေမှာ ရှိတဲ့ ရပ်မိ ရပ်ဖဆိုတာအားလုံးက ဟားဗတ်စ် တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ ပြီးသားတွေချည်းပဲလို့ ထင်နေလားမသိ ။ကျောင်းသားတွေကရော ဟို သင်ရိုးမသင်ချင်ဘူး ဒီသင်ရိုးကို မသင်ချင်ဘူးလို့ငြင်းခွင့် ရှိနေမယ့်ပုံ ။ ဆရာမတွေကို ကျောင်းသားက ပြန်အကဲဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကို အဆင့်မြင့်ပညာ အဆင့်တွေမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လက်ခံပေမယ့် အခြေခံအဆင့်တွေမှာတော့ လက်မခံနိုင်ဘူး ။ လက်မခံသင့် သေးဘူး ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေခံကျောင်းပေါင်း သောင်းနဲ့ ချီရှိရင် သင်ရိုးက သောင်းနဲ့ ချီ ထွက်လာမယ် ။ အဲဒါတွေ အားလုံးဟာ အဆင့်မှီ ပညာရေး ဖြစ်မယ်လို့ခင်များတို့ ထင်ပါသလား ။ ကျောင်းသားတွေ အတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုတာကို ဆိုက်ကားသမားက ရပ်မိရပ်ဖဖြစ်နေရုံ နဲ့ဆွဲခွင့် ရှိသတဲ့လား ။ပညာရေး သုတေသနတွေလုပ် ကလေးတွေရဲ့ ဥာဏ်ရေ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်း ဒါတွေကို အများကြီး စမ်းသပ်လေ့လာပြီးမှ ပညာရှင်တွေပေါင်းစုစဉ်းစားပြီး ထုတ် ကြရမှာ မဟုတ်ဘူးလား ။ ဒီဥပဒေဟာ ပျက်စီးနေတဲ့ မြန်မာပြည် ပညာရေးကြီးကို တိုးတက်သွားစေမတဲ့လား ။ တကယ်ပဲ အဲ့ဒီလို ယုံကြည်လို့ဒီဥပဒေကို ရေးဆွဲ ပြီး မဖြစ်မနေတောင်းဆိုနေကြတာလား ။
နောက်တစ်ချက် မိခင်ဘာသာစကား အခြေပြုသင်ကြားရမယ်ဆိုတာပါတယ် ။ မိခင်ဘာသာ စကားအခြေပြု ဆိုတော့ ကုလားက ကုလားလိုသင် ၊ တရုတ်က တရုတ်လိုသင်၊ ဗမာက ဗမာလိုသင် ၊ ကရင်က ကရင်လိုသင် ၊ကချင် က ကရင်လိုသင်ပေါ့။အဲဒီ့လို ။အဲဒီ့တော့ မေးပါပြီ ။ သင်ရိုးကိုပါ မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမိုးညှင်းမှာ ကချင်ဘာသာနဲ့ ထုတ်မလား ရှမ်းဘာသာနဲ့ ထုတ်မလား ။ ဗမာဘာသာနဲ့ထုတ်မလား ။ ကချင်နဲ့ ထုတ်ရင် ဂျိမ်းဖောလို ထုတ်မလား ၊လီဆူး လိုထုတ်မလား ။ ဘာသာတစ်ခုနှင့် ထုတ်မယ်ဆိုတာနဲ့ ကျန်လူမျိုး ကလေးတွေက ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။ ကယားပြည်နယ် နေရာတော်တော်များများမှာ ကယား ကယန်း ရှမ်း ဗမာတွေ နေကြတယ် ။အဲ့ နေရာတွေမှာ ဘယ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်မလဲ ။ ဘယ်လိုသင်ကြမလဲ ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး တစ်မျိုး တည်း သီးသန့် နေထိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ နေရာတစ်ခု မြို့ တစ်ခု ရှိတယ်ဆိုရင် ကျွှန်တော့ ကို လာပြောပြကြပါ ။ အဲ့ဒီတော့ မြို့ တစ်မြို မှာ ရှမ်းရယ် ကချင်ဲက လီဆူးရယ် ဂျိမ်းဖောရယ် ဗမာရယ် ဂေါ်ရခါးရယ် ဘင်္ဂါလီတွေရယ် စုပေါင်း နေတယ် ဆိုကြ ပါစို့။ အဲဒီ့ မြို့ မှာ မိခင်ဘာသာ စကား ကျောင်း ခြောက်ကျောင်း ဖွင့် ရမှာ ပေါ့ ။ အဲဒီ့ ကျောင်းတွေအတွက် ဘယ်မှာလဲ ပိုက်ဆံ ။ ဘယ်မှာလဲ မိခင်ဘာသာ စကား အခြေပြု ပြီး သင်မယ့် ဆရာ ဆရာမ ။ အဲဒါတွေ ဘယ်က ရမလဲ ။ ဒီဥပဒေဟာလည်း ဒီနိုင်ငံနဲ့ဘယ်လို မှ မသင့်တော်ဘူး ဆိုတာ ပေါ်လွင်ပြီထင်ပါတယ် ။နေရာအားလုံးမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံ စုပေါင်း နေထိုင်နေကြတဲ့ ဒီနိုင်ငံ မှာ ၊ တိုင်းရင်းသား 135 မျိုးရှိတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ မိခင်ဘာသာစကား အခြေပြု ဖြစ်ဖြစ် ၊ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား အခြေပြု ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ့ နှစ်ခုလုံးဟာ တိုင်းပြည်ဖျက်မယ့် ပြည်ဖျက်လက်နက်ပါ ။
ကျွှန်တော် အပေါ်က ပြောတဲ့ အချက်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘယ်လို မှ အသုံး မ၀င်ဘူး ဆိုတာ ပြောပြီးပြီ ။ အခု NNER နဲ့ကျောင်းသားဆိုသူတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ ဥပဒေ အတိုင်း မဖြစ်ဖြစ်အောင် လိုက်ပြီး လုပ်ကြည့်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ ဆိုတာ ထပ်စဉ်းစားကြည့်မယ် ။ ဘာသာရေး အဖွဲ့ အစည်းတိုင်း က ဖွင့်မယ့် သင်ရိုး ညွှန်းတမ်း နဲ့သင်မယ့် ကျောင်းတိုင်းကို လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်ခွင့် ပေးရမယ် ။ မိခင် ဘာသာစကားနဲ့သင်ခွင့် ပေးရမယ် ။ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းကို ကျောင်း အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဝင်တွေက ရေးဆွဲကြမယ် ။ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ မှာ ဆရာအချို့၊ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ် နဲ့ရပ်မိရပ်ဖ ဆိုသူတွေပါမယ် ။ အမှန်တော့ ထပ်တောင် ရှင်းစ၇ာ မလိုတော့ပါဘူး ။ ဒီ လေးကြောင်းကို အစဉ်လိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ကို အဖြေက ရှင်းရှင်းကြီးပေါ်နေပါပြီ ။
အဲဒီ့အခါ ဘာကျောင်းတွေ ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး အခြေခံ စာသင်ကျောင်း တို့၊ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အခြေခံ စာသင်ကျောင်းတို့က တောရာ မြို့ မှာပါ ပေါချင်း သောချင်း ၊ ပေါ်လာမှာပေါ့ ။ အဲဒီ့တော့ မူစလင်တွေက အစ္စလာမ် အခြေခံကျောင်းမှာ တက်မယ် ။မူစလင်ဆရာတွေပဲ စာသင်ကြမယ် ။ ခရစ်ယာန်တွေက ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး အခြေခံကျောင်းမှာ တက်မယ် ။ ခရစ်ယာန် ဆရာတွေပဲ စာသင်ကြမယ် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ရိုးရိုးစာသင်ကျောင်းတွေမှာ တက်မယ် ။ ဘက ကျောင်းတွေပဲ ရှိတဲ့နေရာဆို ဘက ကျောင်းမှာ တက်မယ် ။ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတွေပဲ စာသင်ကြမယ် ။ အားလုံးဟာ သီးသန့် ခွဲထုတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားမယ် ။ စဉ်းစား ကြည့် လေ ။ကျွှန်တော်သာဆို ကိုယ်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ့်ကလေးကို ဘယ်လောက်ပဲ သင်ကြားရေး အဆင့်မြင့် မြင့် မူစလင်ကျောင်းမှာ သွားမ ထားဘူး ။ ခရစ်ယာန်ကျောင်းမှာ သွားမထားဘူး ။အဲ့ လိုပဲ အခြား မူစလင်တွေ ခရစ်ယာန်တွေလည်း အဲ့ လိုနေမှာပဲ ။ကိုယ်ချင်းစာကြည့် ။ အဲဒါဆို အဲဒီ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကြားထဲမှာ ဖြစ်လာမယ့် ကွာဟမှုကို ခင်များတို့သတိထားမိမလား ။ ကျွှန်တော်က ခြောက်တန်းကနေ ဆယ်တန်းထိ ခရစ်ယာန် တောထဲမှာ ကြီးခဲ့ တယ် ။ ခရစ်ယာန်သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးပဲ ။ခုထိ သတိရတုန်း လွမ်းတုန်း ။ ။ ခရစ်ယာန် ဆရာ ဆရာမတွေ အများကြီးပဲ ။ ပြီးခဲ့ တဲ့ လပိုင်းကကို ပြည်နယ်တွေ ခြားနေတာတောင် တကူးတက သွား ကန်တော့ခဲ့တယ် ။ ကိုယ်နေခဲ့ဖူးတဲ့ အင်မတန် ခေါင်လွန်းတဲ့ တောမြို့ လေးကို သံယောဇဉ် ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ ကျွှန်တော်နဲ့အပြင်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အသိဆုံး ။ တက္ကသိုလ် တက်တယ် ။ မောင်နှမလို သွေးရင်းသားရင်းလို ချစ်ခင်ရတဲ့ မူဆလင် သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ် ။ ကျွှန်တော့လို လူမျိုးကို မူဆလင်တိုင်း မကောင်းဘူး လာပြောရင် ခရစ်ယာန်တွေတိုင်း မကောင်းဘူးလာပြော ရင် ကျွှန်တော် ရယ်မှာပေါ့ ။ ကျွှန်တော့မှာ သိပ်ကောင်းတဲ့ ခရစ်ယာန် ဆရာ ဆရာမတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ၊ ကောင်းတဲ့ မူဆလင် သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်လေ ။ မူဆလင်ကလေးတွေမှာ သူတို့ ချစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာမတွေ ရှိတာ ၊ မူဆလင် ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်မှာ သူချစ်တဲ့ ခရစ်ယာန် တပည့် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ တပည့်တွေ ရှိတာ ၊ မူဆလင်ကလေး ခရစ်ယာန်ကလေး ဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတွေ သိပ်ချစ်တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေတာ ကျွှန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဘာသာပေါင်းစုံ အေးချမ်းစွာ အတူတကွ နေထိုင်ဖို့ အတွက် နှောင်ကြိုးလေးတွေ မဟုတ်ဘူးလား ။ တိုင်းပြည်မှာ ကလေးဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ် ။ ကျွှန်တေိာတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တွေကို ခင်များတို့သွေးခွဲဖို့ကြံစည် နေသလား ။ ဘာသာရေးဆိုတာ သိပ်ကို အကဲဆတ်လွန်းတဲ့ အရာ ။ ဘာသာရေး အထိကရုဏ်းဆိုတာ မျက်လုံးက တဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါ ။ တကမ္တာလုံးမှာ အကြမ်းဖက် ၀ါဒတွေ ပြန့် နှ့ံ့ပြီး လူထုက သတိထားမိလာတဲ့ ဒီလို အချိန် ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေ ပြင်းထန်လာတဲ့ ဒီလို အချိန်မှာ ခင်များတို့ က ဒီလို ဥပဒေဆွဲတာ ရိုးသားတယ်လို့ပြောချင်ပါသလား ။ ဒါက ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောတာ ။
အခု တိုင်းရင်းသား အရေးကို ဆက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ။ အပေါ်ကလို ပါပဲ ။ လူမျိုးအလိုက်ခွဲပြီး ကျောင်းတွေဖွင့်မယ် ။ ကိုယ်ပိုင်ပြထာန်းခွင့်ပြုမယ် ။ အဲ့ ဒီတော့ မွန်တွေက သမိုင်းမှာ ဗမာဘုရင်တွေက သူတို့ ကို အနိုင်ကျင့်ပြီး ပိဋိကတ် သုံးပုံကို လုယူပါတယ် လို့သမိုင်းသင်မယ် ။ ရခိုင်တွေက သူတို့ ဟာ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းနဲ့ နိုင်ငံတည်နေခဲ့တာ ။ဘကြီးတော်ဘုရားလက်ထက်မှ ဗမာတွေကျွှန်ပြု ပြီး မဟာမုနိဘုရားကြီးကို မန်းလေးယူသွားတာပါ လို့ သမိုင်းသင်မယ် ။ ကချင်က သူတ်ို့ ဟာ သိခြားလူမျိုးစု လွတ်လပ်သော ၀မ်ပေါင်နိုင်ငံထူထောင်ရေး အနာဂတ် ရည်မှန်းချက် ကို ပထ၀ီမှာသင်မယ် ။ကရင်တွေက သူတို့ ဟာ မြန်မာမျိုးနွယ်မဟုတ် ။ ဥရောပ က ပျောက်သွားတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုး ရေကြည်ရာ မျက်နုရာ ရှာပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာတာလို့သမိုင်းသင်မယ် ။ စောဘဦးကြီးပြောသလို ဖလံတောင်မွှေး ပေါက်တဲ့မြေဟာ ကရင်မြေပဲ လို့ပထ၀ီသင်မယ် ။ အိုး အတွေးထဲမှာတောင် ကောင်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေ ။ လူမျိုး တစ်မျိုး နဲ့ တစ်မျိုး ထိစပ် ပတ်သတ်မှုကနည်း ၊နဂိုကတည်းက လူမျိုးတွေ များသလောက် ဘယ်တော့ မညီညွှတ်လို့သရယံဇာတပုံကြီးပေါ် ဖင်ခုထိုင်ပြီး ခုထိ ခွေးဖြစ်လို့ ကောင်းနေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ထပ်ထပ်ခွဲလို့ကောင်းလိုက်မယ့်အမျိုး ။
ကျောင်းတက်ချိန် နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုပြီး နိုင်ငံတော် အလံ အလေးပြု ဖို့ ဆိုရင် မူဆလင်ကျောင်းတွေက ဘုရားစာရွတ်ပြီး အလ္လာကိုပဲ ဦးညွှတ်နိုင်ကြောင်း ပြောမယ် ။ တိုင်းရင်းသားကျောင်း တွေ ပြည်နယ်သီချင်း ဆိုပြီး ပြည်နယ်အလံကိုပဲ အလေးပြုနိုင်မယ်လို့ပြောမယ် ။ ဘယ်မှာလဲ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကို ဘယ်လိုရိုက်သွင်းမလဲ ။ နိုင်ငံသား သစ္စာ ဆိုတာကို ကလေးတွေရင်ထဲ ရောက်အောင် ဘယ်လို ထည့်ကြမလဲ ။ ပြောကြစမ်းပါ ။ ဒီဥပဒေကို သိပ်ကိုထောက်ခံပါတယ် ဆိုတဲ့ သူတွေ ၊ ဒီဥပဒေကို မူအားဖြင့် ထောက်ခံပါတယ် ဆိုတဲ့ သူတွေ ၊ အခုNNER နဲ့ကျောင်းသားဆိုသူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ ပညာရေးတိုးတက်ဖို့ အတွက် သက်သက် လို့ယုံကြည်ပါတယ် ဆိုတဲ့ သူတွေ လာပြောပြ ကြစမ်းပါ ။ ဒီအကြောင်းတွေကို ကျွှန်တော့လို ပညာရေးနယ်ပယ်က မဟုတ်တဲ့ သာမန် ပြည်သူတစ်ယောက်တောင် တွေးမိသေးတယ်ဆိုရင် ခင်များတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ NNER က မဟာပညာကျော်ကြီးများက မတွေးမိကြဘူးလား ။ မတွေးမိဘူး ဆိုတာ ယုံတယ်တဲ့ လား ။ သိပ်အံ့သြစရာကောင်းတာပဲ ။
ပြီးတော့ ရှိသေးတယ် ။ ဘာတဲ့ ဆရာ ဆရာမ နဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပါတီ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်စွာလုပ် ခွင့်ပေးရမတဲ့ ။ ကျောင်းအုပ်က NLD ၊ ဒုကျောင်း အုပ်က USDP ၊ အထက်တန်းပြ တစ်ချို့ က NDF ၊ NLD ကတစ်ချို့ လူတွေက NDF ကို သစ္စာဖာက်လို့ စွပ်စွဲ ၊ ဂျာနယ်ထဲပါလာ ၊ NLD ကျောင်းအုပ်က စိတ်တွေတို ၊ ကျောင်းအလာ ဆယ်မိနစ်လောက် နောက် ကျသွားတဲ့ NDF ဆရာမကို ပိုပိုသာသာလေး ဆူလိုက်မိ ။ အဆူခံရတဲ့ ဆရာမက စိတ်တွေတို ၊ အဲဒီ့အချိန်မှာ USDP ဒုကျောင်းအုပ်က NLD တွေက အဲလို အစွန်းရောက်ကြောင်း မိမိတို့USDP က အင်မတန်သဘောထားကြီးကြောင်း မဲဆွယ်သွေး ထိုး ၊ NDF ဆရာမက ခံစားချက်တွေ ပေါက်ကွဲ ၊ သူစာသင်ရတဲ့ အတန်းထဲက မြို့ နယ် NLD ပါတီ ဥက္ဏဌသား က အိမ်စာမလုပ်လာတာကို နင်က အဖေအရှိန်နဲ့ငါကို မလေးစားတာလား ၊နင်တို့ ပါတီ ဥက္ကဌကို ငါက သောက်ဂရုကို မစိုက်ဘူး လို့ ပြောမိ ၊အဲ့ ကျောင်းသားက ပါတီကို စော်ကားတာ မခံဘူးဆိုပြီး NLD ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ သွား တိုင် ၊ ကျောင်းအုပ်နဲ့ဆရာမနဲ့ပြသနာတွေ အကြီးအကျယ်တက် ၊ အံဒီမှာ USDP ဒုကျောင်းအုပ်က ပညာရေးမှူးကို NLD ကျောင်းအုပ်ကြီး ညံ့ကြောင်း မျက်နှာလိုက်ကြောင်း သွား သွေးထိုးပြသနာတွေတက် ။။။ အတွေးထဲမှာကို ပျော်စရာကြီးနော် ။
၀န်ထမ်းဆိုတာ နိုင်ငံတော်ရဲ့အဖွဲ့ အစည်းပါ ။ ဘယ်သူ ဘယ်ပါတီ အစိုးရဖြစ်ဖြစ် တက်လာတဲ့ အစိုးရဟာ ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့အားကို ယူပြီး နိုင်ငံတော်ိကို မောင်းနှင်ရမှာပါ ။ဘာလို့Team Work နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေကို စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် လုပ်ကြမလဲ ။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် မိဘ နဲ့ သားသမီး ၊ မောင် နဲ အစ်မ တောင် မခေါ်နိုင် မပြောနိုင်သည်အထိ စိတ်ဝမ်းကွဲကြသေးတာ ၀န်ထမ်းတွေက ဘယ်လိုလူတွေ မို့ တုန်း ။ တခြားဘာမှ မကြည့် နဲ့။ ခင်များတို့ တောင် Facebook ပေါ်မှာ ကိုယ်နဲ့သိပ်အယူအဆကွာသူတွေကို Unfriend Block လုပ်ကြသေးတယ်မလား ။သူတို့ပိုစ်တွေ မြင်ရင် စိတ်ဆင်းရဲ တယ်ဆိုပြီးလေ ။ ၀န်ထမ်းအချင်းချင်းက မမြင်ရအောင် Block လုပ်လို့ မရဘူး ဗျ ။ သူတို့ မှ ကိုယ် ကြိုက်တဲ့ ပါတီ မဲပေးခွင့် ရှိနေတာ ပဲလေ ။ ရုံးခန်းမှာ သမတပုံ ချိတ်ထားပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာ ဒေါ်စု ပြက္ခဒိန်တွေ ပလူပျံအောင် ချိတ်ထားတဲ့ ကျောင်းအုပ်တောင် ခင်များတို့ဥပဒေကို မထောက်ခံဘူး ။ တကသိုလ် ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တာ လက်ခံလို့ ရပေမယ့် အခြေခံတွေမှာ နိုင်ငံရေး အရောင်တွေ မဆိုးသင့်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ တွေးကြည့် ။ ကိုယ်ဆယ်တန်း အသက် 15နှစ်လောက်တုန်းက ကိုယ့်အတွေးအခေါ်တွေ အသက် 25 နှစ်မှာ မှန်တယ်လို့ ထင်သေးရဲ့ လားလို့။ သိပ်နုလွန်းတဲ့ နှလုံးသားတွေကို အရောင်ဆိုးဖို့ကြိုးစားတာ ပညာရေးတိုးတက်ဖို့ တဲ့ လား ။အခြေခံပညာကျောင်းသား တစ်ယောက်ဟာ အရာရာကို တော်လှန်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတာထက် အရာရာကို သင်ယူဖို့ ပဲ စိတ်ဝင်စားသင့်သေးတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးကောင်းတယ် လို့တစ်ခါမှ မတွေးဖူး မပြောဖူးဘူး ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွက်တော့ နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်တွေ ဆွဲတဲ့ ဥပဒေကို မျက်လုံးမှိတ် မထောက်ခံနိုင်ဘူး ။ (သေချာဖတ်ကြနော် ။ အမျိုးသား သစ္စာဖောက်လို့ မသုံးဘူး ။ အစိုးရ သစ္စာဖောက်လို့ မသုံးဘူး ။ နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်လို့သုံးထားတာ ) ။ ကိုယ့် ဆီမှာ ရှိတဲ့ မုန့် က စားမကောင်းလို့တမြည့်မြည့်သေမယ့် အဆိပ်သီးကို တော့ ဘယ်သူမှ ခူးမစားဘူးမလား ။ တချို့ ကပြောတယ် ။ဒီဥပဒေကို မူအရထောက်ခံတာ အသေးစိတ်က လွှတ်တော်မှာ ဆက်ညှိကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ ။ အဲဒါဆို သူတို့ ဆွဲလာတဲ့ ဒီဥပဒေကို သူတို့ စိတ်တိုင်းကျ အတည်မပြုပေးရင် သပိတ်ဆက်မှောက်မယ်လို့ကြိမ်းဝါးတာ ဘယ်သူတွေလဲ့ ။လွှတ်တော် အဆုံးအဖြတ်ကို နာခံဖို့ မပြောနဲ့လွှတ်တော်မှာ ကြားနာမယ့် ကြားနာမှုကို တောင် မစောင့်နိုင်တဲ့ သူတွေဟာ လွှတ်တော်မှာ ဆက်ဆွေးနွေးရင် ပြေလည်မယ်ထင်လို့ လား ။အခု အစိုးရက ခင်များတို့ ပြောတဲ့ အတိုင်း လွှတ်တော်တင်ပေးပြီးပြီ ။ ရည်ရွယ်ချက်ရိုးသားတယ်ဆို လွှတ်တော်က ခင်များတို့ ကို ဖိတ်ထားတဲ့ ကြားနာမှု ကို သွားတက်သင့်ပြီ ။ အခုတော့ ဒါတောင် ရန်ကုန် မ၀င်ရလို့ပွဲ မဆူ ဆူအောင်လုပ်နေတယ် ။ ခင်များတို့ က ရန်ကုန်ဝင်ချင်တာလား ၊ ဥကဒေပြင်ချင်တာလားလို့ပြန်မေးရမလိုဖြစ်နေပြီ ။ အဆင့်အတန်ှးရှိရှိ လွှတ်တော်ခေါ်ဆွေးနွေးတာကို ဘာလို့ များ လမ်းဘေးမှာ ထိုင်ပြီးအော်ချင်နေတာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားတတ်တဲ့ သူတိုင်း တွေးမိတယ် ။
ဘက ကျောင်းနဲ့ စဖွင့်တော့ ဘက ကျောင်းနဲ့ ပဲ ပြန်ပိတ်မယ် ။ ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ စာသင်ကျောင်းဆယ်ကျောင်းလောက်မှာ ရှစ်ကျောင်းလောက်က ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲ မှာ ရှိကြတာပါ ။ ဟိုးအရင်ခေတ်ကတည်းက ရွာတိုင်းမှာ စာသင်ကျောင်းသာ မရှိမယ် ဘုန်းကြီးကျောင်းကတော့ ရွာတိုင်းရှိကြတဲ့အတွက် စာသင်ကျောင်းအတွက် နေရာ မရှိတဲ့ ရွာတွေမှာ ဘုန်းကြီးတွေက သူ့ မြေနေရာက်ို လှူထားကြတယ် ။နောက်ပိုင်း အစိုးရက ကျောင်းဆောင်သစ်တွေ ချပေးလာတော့ ကျောင်းမြေနေရာဟာ ပုံစံ 105 ပေါက်မှ ချပေးတော့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရွာကျောင်းဘုန်းဘုန်းတွေက သူတို့ကျောင်းမြေကို တရားဝင် စွန့် လွှတ် လှူဒါန်းကြရတယ် ။ အဲ့ဒါကြောင့် စာသင်ကျောင်းအများစုဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာ ရှိကြတာကိုတွေ့ ရတယ် ။ကျွှန်တော်ရောက်ဖူးတဲ့ ရွာတွေကတော့ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းက ရွာတွေများတဲ့ အတွက် ခရစ်ယာန်တော့ မတွေ့ ဘူး ။အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေတော့များတယ် ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲက စာသင်ကျောင်းကို မူစလင်ကလေးတွေ ကျောင်းလာတက်လို့ပြသနာဖြစ်တယ်လို့တစ်ခါမှ ကို မကြားဖူးခဲ့ ဘူး ။ဒါကို ရေးပြတာက ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေ ပညာရေးတွေအပေါ် ဘုန်းကြီးတွေရဲ့သဘောထားကို ပေါ်လွင်စေချင်လို့ ပါ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ မြန်မာလို့ အစပြုလာမယ့် ပျူခေတ်ကတည်းက ဒီတိုင်းပြည်မှာ ထွန်းကားခဲ့ တဲ့ ပြည်တည်ထာင်ဖက် ဘာသာ ပါ ။ မြန်မာ့ သမိုင်းအဆက်ဆက် ရှင်ဘုရင်တွေ က စလို့လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အထိ ဘကကျောင်းကထွက်ခဲ့ကြတာပါ ။ ခေတ်အဆက်ဆက်ခေါင်းဆောင်များ ဘယ်သူတွေ ဘက ကျောင်းတွေနဲ့ကင်းခဲ့ပါသလဲ ။ လက်ရှိလည်း ကျေးရွာတွေမှာ ဘက ကျောင်းတွေ လိုအပ်နေတုန်းပါ ။ မြို့ ပေါ်မှာလည်း မိဘမဲ့ ကလေးပေါင်း မြောက်မြားစွာဟာ အဲဒီ့ ဘက ကျောင်းတွေကို မှီခိုနေရဆဲပါ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတာ လက်ရှိ လည်း ဒီနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ 70% နှုန်းလောက် ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာပါ ။ မြန်မာနိုင်ငံ သူ့ ကျွှန်ဘ၀ရောက် ကတည်းက ကျေးလက်မြန်မာ့ပညာရေးကို ဘက ကျောင်းတွေနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ကျားကန်ပေးခဲ့ကြတာပါ ။ ဒီကျေးဇူးတွေကိုမှ မထောက် ဘက ကျောင်းတွေ ဖွင့်ခွင့်ပေးပြီး အခြားဘာသာရေး အခြေခံကျောင်းတွေ ဖွင့်ခွင့် မပေးတဲ့ အတွက် နိုင်ငံတော် သီချင်းထဲက “ ခွင့်တူညီမျှ ၀ါဒဖြူစင်တဲ့ မြေ “ ဆိုတဲ့ စာသားကို ဆိုဖို့ရှက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ လစ်ဘရယ်အစွန်းရောက်တွေကို မေးချင်းပါတယ် ။ဆော်ဒီမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်ရသလား ။ ဘကကျောင်းဖွင့်လို့ ရလား ။ အမေရိကန်မှာ သွားဖွင့်မယ့် ဘက ကျောင်းကို အမေရိကန် အစိုးရက တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမလား ။လက်ခံမလား မေးချင်ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ရှိ မရှိ မူဆလင်ဦးရေ ဗလီအချိုး ၊ ခရစ်ယာန်ဦးရေ ချက်ကျောင်း အချိုးကို ကြည့်ကြပါ ။ မြန်မာရှင်ဘုရင်တွေ လက်ထက်ကတည်းက ကိုယ့်မြေမှာ အခြားဘာသာကို သာသနာလာပြု တဲ့ အဖွဲ့ ကို ၊မြေနေရာပေး ချက်ကျောင်းဆောက်ခွင့် ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံပါ ။ စစ်ရှုံးလို့ ပါလာတဲ့ ဘာသာခြားသုံ့ ပန်းတွေ အတွက် ဗလီဆောက်ပေးပြီး မြေနေရာချထား ပေးခဲ့ တဲ့ နိုင်ငံပါ ။ ဒါတောင် ဘက ကျောင်းတွေ အပြိုင် စာသင်ကျောင်း ဖွင့်ခွင့် မရလို့ရှက်တယ်ဆိုတော့ကာ ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်း မသိတော့ပါ ။ သမိုင်းချင်းတူသလားလို့ ပဲ မေးချင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီတော့ အခြားဘာသာရေးအခြေခံ စာသင်ကျောင်းတွေ ဖွင့်ခွင့် မရလို့ဒီဆန္ဓပြ ပွဲကြီးကို မရုတ်နိုင်ဘူး ဆိုခဲ့ရင်တော့ အမျိုးသားရေး မောင်နှမများ အားလုံးကို လည်း တောင်းပန်ပါတယ် ။ ကျွှန်တော်တို့ ပဲ ဘက ကျောင်းတွေကို ဖျက်ပေးလိုက်ကြရအောင်လားဗျာ ။ လက်ရှိ လူဦးရေ 70%ကျော်ကိုးကွယ်တဲ့ ပြည်တည်ထောင်ဖက်ဘာသာတစ်ခုအတွက် ဒီလောက်တောင် အခွင့်ခံစားခွင့် မရှိဘူးဆိုရင် ကျွှန်တော်တို့ ပဲ လျှော့ လိုက်ကြရအောင်လေ ။ ဒီနိုင်ငံ အနာဂတ်အတွက် အခြား ဘာသာရေးအခြေခံကျောင်းတွေကို တော့ ဖွင့်ခွင့်မပေးပါရစေနဲ့။ တိုင်းရင်းသား ဘာသာ စကား တွေလည်း တိုးတက်စေချင်ပါတယ် ။ အခြေခံကတည်း က တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအလိုက် စာသင်ချိန်တွေမှာ တစ်ချိန်သက်သက်ယူပြီး တိုင်းရင်းသား ဘာသာသင် ၊ တဖြည်းဖြည်းချင်း အဆင့်မြှင့် ၊နောက် ဆုံး တက္ကသိုလ်တွေမှာပါ BA မြန်မာစာ လိုမျိုး ၊ BA ရှမ်းစာ ၊တို့BA ကရင်စာ တိုအထိ လုပ်ကြပါ ။ ကန့် ကွက်ရန် မရှိပါ ဗျာ ။ သင်ရိုး ကိုတော့ မိခင်ဘာသာစကား အခြေပြု လို့မလုပ်ကြပါနဲ့ ။မိခင်ဘာသာစကား အခြေပြုဆိုရင် ကျွှန်တော်တို့ လို ၀န်ထမ်းသားသမီးတွေက ကရင်ပြည်နယ်ပြောင်းရင် ကရင်လိုသင်လိုက် ကယားပြောင်းရင် ကယားလိုသင်လိုက် ၊ရှမ်းပြောင်းရင် ရှမ်းလိုသင်လိုက်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ် စာတတ်ပါတော့မလဲလေ ။
လူတွေဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြင်မတူတဲ့ အတွက် လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ် ။ ကွဲလွဲခွင့် ဆိုတာကို အပြန်အလှန်လေးစားဖို့ အတွက်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရိုးသားတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်မှု ရှိဖို့ လိုပါတယ် ။ ကျွှန်တော်ကတော့ NNER ကို လုံးဝကို ယုံလို့ မရတော့တာက အထက်က အချက်တွေကို အရင်ပညာရေးဥပဒေဆွဲကတည်းက ထည့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့လို့ဆရာ ဆရာမကြီးတွေက မဖြစ်နိုင်ကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် ရှင်းပြပြီးသားပါ ။ ဒါကို သပိတ်မှောက်တဲ့ နည်းနဲ့ထပ်ထည့်ဖို့ ကြိုးစား လာကတည်းက အဖြေက ရှင်းနေပါပြီး ။ဒါပြင် ဥပဒေပြင်ဖို့ ထက် ရန်ကုန်ဝင်ဖို့ က ပိုအရေးကြီးနေလေတော့ ပိုရှင်းသွားတယ် ဆိုရမှာပါ ။
ဒီပပညာရေး ဥပဒေ ပြသနာဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုတည်းအတွက် အန္တရာယ်ကြီးတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွှန်တော်တို့တစ်နိုင်ငံလုံးကို အစိတ်စိတ်ခွဲမယ့် ရေရှည်စီမံကိန်းပါ ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ပြည်သူလူုထုနဲ့ တန်တဲ့ အစိုးရပဲ ရမယ်ဆိုတာ လက်ခံတဲ့ အတွက် ဘယ်အစိုးရတက်တက် သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး ။ ပြည်သူလူထု ဥာဏ်ရည် နဲ့ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာဖို့ ကို ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် ။ အဲဒီတော့ ခင်များတို့ ဘာသာ အမုန်းကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် ၊ အငြိုးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ၊ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပိုက်ဆံကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိ အစိုးရကို ဖြုတ်ချချင်ရင် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ဖြုတ်ချကြပါ ။ထူးပြီးးဝမ်းနည်းရန် မရှိပါလေ ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ နယ်နမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အနော်ရထာလက်ထက်က စလို့ခေတ်အဆက်ဆက် ကျွှန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့ သွေးနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ရတာပါ ။ ခင်များတို့လိုဘ တစ်ခုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့မြန်မာ ဆိုတဲ့ အမည်ရဲ့အနာဂတ် ကို သတ်မပစ်ကြပါနဲ့ လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ် ။
Wai Nwe Lwin
ရှင်ကြီး နိဂိ မိ and 279 others like this.
ရှင်ကြီးနိဂိမိရှယ်သော မိုးဆက်ကို ထံမှ ကူးယူတင်ပြပါသည် ။
ဘာသာရေး ဆေးထိုးတာလောက် ယုတ်ညံ့သူ မရှိ.. အေးလေ ရဲဆိုတော့လဲ…။
ဦးနှောက်ကို ဘယ်ရော ညာရောသုံးသင့်တယ် လို့ တခြမ်းပဲ သုံးတဲ့ ရလာဒ်ကတော့ ဒီလိုိထွက်လာလေရဲ့
လို့ ပြောလည်း ပြောချင်တယ် ပြောလည်း မပြောရဲဘူး
ဘကကျောင်းပိတ်ခိုင်းဖို့.. ကျောင်းသားတွေတင်သွင်းဖူးတယ်ဆိုတာနဲ့တင်.. ကျောင်းသားတွေကို… တော်တော်အထင်ကြီးသွားပြီ…။
ကြုံလို့ပြောရရင်.. ယူအက်စ်မှာ.. အဲလိုပညာရေးဥပဒေမျိုးဆိုတာကို.. က… ဥပဒေပြုခွင့်/ထုတ်ခွင့်မရှိ..။
အမှန်ကတော့.. အဲဒီပညာရေးဥပဒေဆိုတာ.. ကျောင်းတွေကို.. ဖယ်ဒရယ်(ပြည်ထောင်စု)အဆင့်က.. ကိုင်တွယ်ထိမ်းချုပ်ခွင့်ဆိုတာ… ရှိကိုမရှိရ..။ ဖြစ်ကိုမဖြစ်သင့်..။
ကျောင်းဆိုသည်မှာ.. ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်တွင်သာ..ပြဌာန်းခွင့်.. လွတ်လပ်စွာရှိသင့်..ရှိနေကြပါကြောင်း..။
11 March 2015 10:38(+0630) (လွန်ခဲ့သော ၁ နာရီ ခန့်က)
သူတို့ကို ဘယ်နေရာမှာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ထားသလဲဆိုတာ အတိအကျ မသိရသေးပေမဲ့ သာယာဝတီနဲ့ အင်းစိန်ထောင်တွေမှာ အဖမ်းခံရတဲ့ ကျောင်းသားတချို့ ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်နေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ရဲတွေ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးရာကနေ လွတ်မြောက်လာတဲ့ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ လည်း ဘေးကင်းရာကို တိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။
ဆရာ့ဆရာတွေ စကားတွေက တော်ရုံလူ ပြန်မရှင်းနိုင်တဲ့ အလုံးတွေ
“ကိုက်တတ်တဲ့ ခွေးသွားဆွရင် ခွေးကိုက်ခံရတာ နည်းသေး ဆိုတာမျိုး…”
ဒီလို စကားတွေကို victim blaming ခေါ်ပါတယ်။
အပြစ်လုပ်သူထက် ခံရသူကို အပြစ်တင်တတ်တဲ့ အလေ့အထပါ။
“မုဒိမ်းကျင့်တာတောင် နည်းသေး။ နင်က မြူဆွယ်သလို ဝတ်တာကိုး ဆိုတဲ့ စတိုင်ပါ”
အစ်ရှူးတွေကို ခွဲမကြည့်ပဲ ရောထွေးစဉ်းစားရင် ဒီလို အတွေးတွေ မှန်သယောင် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။
ဘယ်သူမှား ဘယ်သူမှန် ပြောရခက်ပါတယ်။
အဲဒီ ကွန်ဖလစ်ကို မတရားနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလာရင် ကွန်ဖလစ် အစ်ရှူးက သတ်သတ်ပါ။
အဓမ္မ အမှုဟာ အဓမ္မ အမှုပါ။ ရောတွေးလို့ မရပါဘူး။
ဖြစ်မှာပေါ့ ဆရာတော်ကြီးစကားမှ နားမထောင်တာ။ အလကားဟာတွေ သေမှအေးမယ် ဆိုသူတွေ ဒါလေး သိစေချင်တာပါ
မရိုက်ချင်ပဲ (မရိုက်ချင် ရိုက်ချင်နဲ့) ရိုက်နေကြတာလေးးး
ပညာရေးဥပဒေပြင်ဖို့ တောင်းဆိုတာတောင် ဒီလောက် ခံ ရတာ။
ညောင်၂ပင် ဥပဒေထဲက သူတို့ အကျိုးစီးပွါး တိုက်ရိုက်ကာကွယ်ထားတဲ့ အချက်တွေ ပြင်ဖို့ ဆို
ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆုတောင်းကြတာပေါ့ လေ နော့!!!
ဖေကြီး ရိုက်လိမ့်မယ် နော့။
ဖေကြီး တို့ အကြိုက် ငြိမ်နေကြတာပေါ့။
စဉ်းစားလေ . . . ပြီးရင် ဆုတောင်းးးး
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတာ… လိမ်ပြီး ပြနေတာလား…
အလိင်ခံချဉ်သူတွေ အတွက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေတာပေါ့ကွဲ့.. ကြည့်ထား အကယ်ဒမီ ရလိပ်မဲ..
တကယ်ဆွေးနွေးပြီး.. တော်တော်များများကိုပြင်ပေးရပါလိမ့်မယ်..။ စောင့်ကြည့်နေပါ…။
အခုအကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စကတော့.. အစိုးရလုပ်တဲ့လူတွေ.. ကျောင်းသားတွေဘာကိုလိုချင်.. ဘာဖြစ်ချင်မှန်း.. မသိလို့.. ဖြစ်သွားတာလို့ထင်…။
အဲလိုမသိပဲ.. အစိုးရတက်ဖြစ်နေတာကိုကလည်း.. အံ့စရာ..။
မ၄ယှားကို ဖုံးဆက်မို့ လိုင်းမကောင်းသေးလို့တဲ့.. အဲသာကြောင့်ပေါဒ အမ်ပီတီလိုင်း မသုံးပါနဲ့ဆိုဒါ ပေါမယဘူး.. စစ်တပ် အထင်လွဲမှာ စိုးရို့တဲ့…
… ဒီခေတ်လူငယ်တွေကို ပြောချင်တာက…။
၈၈ ဆန္ဒများပြကြရင်လေ…။ စစ်သားတွေက.. အဲဒီအောက်က စစ်တိုက်ရင်သုံးတဲ့.. ဂျီ၃၊ ဂျီ၎ကြီးတွေမှာ ဘက်နှက်တွေနဲ့.. ဓာတ်ပုံအတိုင်း… နေရာယူ…
ပြီးတော့.. ချီတက်ပြီး.. အဲလိုဘက်နှက်တွေနဲ့ထိုးလည်းထိုး.. ပစ်လည်းပစ်..။
အဲဒီကနေ.. ဒီနေ့ဒီအခြေထိရောက်အောင်.. ဘယ်လောက်စတေးထားရသလည်း..။
ပါးပါးနပ်နပ်ကိုင်တွယ်ပါ..။ မူလပန်းတိုင်မပျောက်စေပါနဲ့..။ စိတ်ရှည်ပါ..။
၂၀၁၅.. ဒီချုပ်မဲပြတ်အနိုင်ရရေး.. ဒို့အရေး…။
ကြုံလို့ဆက်ပြောရရင်.. ၈၈ တုံးကကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေလို့.. သိတာတွေရှိတယ်..။
၂၀၀၇ကတော့.. ယူအက်စ်မှာမို့.. မန်းဂဇက်အနေနဲ့.. မီဒီယာတာဝန်ကျေအောင်လုပ်ခဲ့တာကို.. အောက်က၀က်ဘ်ဆိုက်ကြည့်ရင်သိမှာပါ..။
ကျုပ်ဆီကတဆင့် ပို့ပေးလိုက်တဲ့..သွေးစွန်းနေတဲ့..ဖိနပ်ကလေးဆိုရင်.. မီဒီယာတော်တော်များများသုံးနေကြတယ်..။
အဲဒီအချိန်က.. အခုထိပ်ရောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့.. ဧရာဝတီတို့.. မဇ္ဇျိမတို့.. ဒီဗွီဘီတို့.. ထက်အများကြီးရှေ့ရောက်ပြီး.. မြန်မာ့အခြေအနေကမ္ဘာတန်းသိအောင်.. ဓာတ်ပုံတွေပို့နိုင်ခဲ့တယ်..။
ဒီချုပ်​​တော့မဲနိုင်​ပါရဲ့ ၁၉၉၀ တုန်းကလို အာဏာ လွဲ မ​ပေးရင်​ ဘိုလုပ်​မလဲ သူဂျီးရဲ့ ။ အခုလုပ်​​နေပုံက နိုင်​ငံ​တော်​ အာဏာ ကို အ​သေရရ အရှင်​ရရ ဆုတ်​ကိုင်​ထားချင်​​သေးတဲ့ ပုံမျိုး ။
အခုဟာက အဲဒီ အဆင့် အထိ မရောက်နိုင်အောင် (တနည်း) ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်အောင် ကို နည်းမျိုးစုံ သုံး နေတာပါ။
နိုင်လိုက် ရင်တော့ သူတို့ ထဲ က လူ တွေ အများစု ပါလာမှာပါ။
အဲလို ပါလာဖို့ ကို နည်းမျိုးစုံ သုံးပြီး စည်းရုံးဖို့ က ပလန် ဘီ တွေ စီတွေ ပေါ့။
လူမညီ ရင်တော့ ဒီတစ်ခါ ရေစုန် မျော ရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ ကွ ကိုယ်သာပလန် ဆွဲထားပေတော့။
အခု တောင် သူတစ်မျိုး ၊ ငါတစ်ဖုံ နဲ့။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မို့ သာ စိတ်မပျက်တယ်။
ဒီချုပ်လည်းမဲနိုင်မှာပါ…။ ဥပဒေပြုအာဏာမှာ အဓိကဖြစ်လာမှာပါ…
အစိုးရ(အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ) ကတော့ …ဒီချုပ်မရ..။
စစ်တပ်က.. ကြည့်ရတာ.. ၀န်ကြီးအဖွဲ့အသစ်တောင်ရေးပြီးနေပြီ..
မဲ .. ဘယ်လောက်ဒီချုပ်ဖက်ပါသွားမလဲ.. ချိန်ဆစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့…ထင်…။
ကျွန်မ တော့ သိပ်လောဘ မကြီးပါဘူး။
ကျွန်မတို့ ကို လူလူသူသူ သတ်မှတ်ပြီး အနိုင်မကျင့် တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ဖို့ ဘဲ လိုပါတယ်။
ပြည်သူတွေ အတွက် ဥပဒေ ဆိုတာ အားလုံး တစ်ပြေးညီ ဘယ်သူ့ ကိုမှ လိုတိုး ပိုလျှော့ မလုပ်တဲ့ မှန်ကန် မျှတ တဲ့ ဥပဒေပါ။
သူခိုး နဲ့ အထူးအခွင့်ရသူများ ကင်းဖို့ လဲ အဓိပေါ့။
ကျွန်မ ထင်တော့ ဒီ ကျောင်းသားပွဲ ဟာ သူတို့ အထဲ က တင်းမာသူများ ကို အလှည့်ပေးလိုက်တာလားမသိ။
ဂိမ်းကစားသလို မင်း လုပ်ကြည့်လေ။ မနိုင်ရင် ငါ့ အလှည့် ဆိုပြီး ပျော့ပြောင်းသူများ အလှည့်ပေါ့။
ကြည့်ရတာ ကျောင်းသားတွေ ကို ထိတာ နဲ့ ၈၈ ကလို လူထုကြီး အုံကြွလာလိန့်မယ် မှန်းခဲ့ သလားဘဲ။
တမင် ကို မဖြစ်ဖြစ် အောင် လုပ်ခဲ့တာပါ။
ပရိယာယ် တွေကတို့ ကြွယ်ပါ့။
၈၈ လောက် က ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားတွေ…၊ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေ
အခုခေတ် ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားတွေ…၊ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေ